Ny fampielezan-kevitra Crowdfunding dia manomboka manao ny GNUPanel v2.0 ho zava-misy | Avy amin'ny Linux
Ireo mpampiasa mitazona tranokala amin'ny fampiantranoana dia mahazatra amin'ny CPanel.
CPanel dia tontonana fandoavana vola azo, izay ampiasain'ny ankamaroan'ny mpamatsy fampiantranoana. Amin'ny alàlan'ity tontonana ity dia azonao atao ny manao asa isan-karazany, mitantana ny fonenanay na subdomain, FTP, mailaka, tranokala, ankoatry ny safidy hafa.
Ny fahazoan-dàlana CPanel dia tsy mamela antsika hanova azy io, mampifanaraka azy amin'ny filantsika, mizara azy, tsy misy na inona na inona ataon'ilay rindrambaiko Free Software.
Ahoana no tianao hananana tontonana fampiantranoana Free Software?
Na tsara kokoa noho izany, dia ampidiro ao amin'ilay tontonana fampiantranoana, ataovy izay hahatanteraka ny fivoarany, ampiasao izy io ary anaovy fanatsarana sy fanovana.
Midika ho takelaka azonao apetraka amin'ny mpizara anao amin'ny tsotra aho apt-mahazo mametraka gnupanel ary afaka mitantana ny zava-drehetra mifandraika amin'ny domains, subdomain (dns) izy ireo, mametraka tranokala an-tserasera na an-tserasera amin'ny tsindry tsotra, https, mamorona ny ftp antsika manokana miaraka amin'ireo mpampiasa ao anatin'ny 1 minitra. Na asao ny mpizara mailaka antsika ao anatin'ny minitra vitsy tsy misy fiezahana.
2 Fanentanana ho an'ny daholobe
3 Inona no tianao hahatongavana vokatr'izany
4 Antsipirian'ny rindrambaiko
5 Tsy afaka manome? Fomba hafa manampy
6 Mitandrina ny vaovao?
Fanentanana momba ny Crowfunding ho an'ny GNUPanel 2.0
GNUPanel dia tontonana nosoratan'ny mpanorina ny GNUtransfer (orinasa iray ihany misy antsika lohamilina nokaramaina ary misaotra izay iasan'ny DesdeLinux). Maimaimpoana izy io ary azon'ny besinimaro atao mandritra ny taona maro.
Izy io dia tontonana izay tadiavin'izy ireo soratana indray avy eo am-boalohany, hamerenany azy io tanteraka ka ny kinova vaovao (v2.0) dia tsara lavitra noho ny ankehitriny.
Ny zavatra tianao ho tratrarina dia ny fanatontoloana ny GNUPanel. Io dia ahafahan'ny mpampiasa 'an-tongotra', olona tsy mahalala na inona na inona (na tsy betsaka) momba ny rafitra mandroso na ny fitantanana tambajotra, hanao ireo voalaza etsy ambony ireo, hijery ny statistika ary hitantana tanteraka ny toerana fampiantranoany.
GNUPanel koa dia hanana rafitra plugin (eny, toa ny Firefox), izay ahafahan'ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux maneran-tany manampy asan-dahalo sy safidy ary manatsara azy tsy tapaka.
Tsy toy ny CPanel (izay tokony handoavan'izy ireo $ 200 isan-taona ary tsy ho tsotra loatra ny fametrahana) GNUPanel dia afaka ary manan-danja indrindra: Rindrambaiko Maimaim-poana, mba hahafahan'ny tsirairay mandray anjara amin'ny fampandrosoana azy. Tetikasa ho an'ny fiarahamonina io, ataon'ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux manerantany ary ho an'ny fiarahamonina.
CrowFunding no fomba vaovao ahafahan'ny hevitra na tetikasa lehibe mitantana ny fanangonana ny teti-bola hampiharina, hampandeha azy ireo ho tena izy.
Izy io dia misy ny manazava ny hevitra, ny zavatra tianao ho tratrarina miaraka amin'ilay tetikasa ary avy eo mangataka fanomezana mba hahafahana mampihatra an'io tetikasa io.
Ricardo, Jorge ary Mariano no mpanoratra ny GNUPanel, ny tolo-kevitr'izy ireo ao amin'ny pejy crowdfunding dia ny hanangona $ 25.000 hahafahana miasa eo anelanelan'ny 12 sy 16 herinandro tsy tapaka ary tsy misy fitsaharana. Afaka miala amin'ny asany andavanandro izy ireo ary manokana ny 3 mandritra ny volana maromaro mba hamerenana mandamina sy hanatsara ny GNUPanel.
(Ity fanoratana ity dia nomanina taona vitsivitsy lasa izay ary tsy tanteraka noho ny antony voalaza. eto)
Hetsika antsoina hoe "rehetra na tsy misy" ity, ny tanjon'izy ireo dia ny hanangona $ 25.000 fa raha tsy tratrany izany dia averina amin'ny laoniny tanteraka ny vola, izany hoe, eritrereto hoe te-hanome 20 $ aho fa na inona na inona faniriako dia mila fanampiana aho ; tsy ampy ny olona nanome ary tsy tonga ny isa tadiavina. Tsy hotehirizin'ny olon-kafa ny volako, mainka fa ny 100% ny vola nomeko dia haverina amiko. Raha voatondro ny fandraisana anjara dia midika izany fa voafaritra ny kaody vaovao.
Inona no tianao hahatongavana vokatr'izany
Te hahatratra tontonana maimaimpoana tanteraka ianao, ny safidy maimaim-poana sy malefaka indrindra amin'ny CPanel.
Ny kaody dia ho 100% vaovao, nohosorana, namboarina, izy rehetra dia eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL.
Ho fanampin'izany, ny fametrahana ity takelaka vaovao ity dia ho tena tsotra, ho azon'ny rehetra ampiasaina izy ireo .DEB fonosana (na ny hafa) mba hametrahana azy tsy misy olana, ankoatry ny fampidirana azy ao amin'ny toeram-pivarotana ofisialy distro toa an'i Debian. .
Rafitra plugins, addons, izay ahafahan'ny tsirairay manampy, manampy amin'ny fampandrosoana amin'ny fomba tsotra, tsy misy olana be.
Fandraisana sary vaovao tanteraka, izay azo namboarina amin'ny endrika ivelany sy ny refy.
Fanohanana ho an'ny IPv6.
Ny kaody loharano sy ny fonosana dia misy azon'ny rehetra ankafizina, ka afaka ampidirina ao amin'ny trano fivarotana distros ofisialy.
Tsy manavakavaka ny GNUPanel, tsy maninona na lehibe na antonony na kely ny orinasanao, azonao atao ny mametraka sy mampiasa GNUPanel tsy andoavam-bola
Amin'izao fotoana izao dia misy ny zava-misy, ny kaody ny kinova GNUPanel amin'izao fotoana izao dia tsy mamela anao hanao izay tianao, tsy azo hatsaraina velively ny fanitsiana sy ny fanitsiana, izany no antony tianao hamerenana indray ny programa mba hitondrana azy io ambaratonga vaovao sy tsara kokoa.
Hosoratana indray izy rehetra amin'ny alàlan'ny PHP sy Postgre ho toy ny tahiry.
Izay rehetra avelan'ny kinova GNUPanel ankehitriny dia ao amin'ny kinova vaovao (subdomain, FTP, kaonty mailaka, fitantanana tahiry, lisitry ny mailaka, fanodinana, tapakila, fiarovana ny lahatahiry, statistika sns.)
Ny fahaizana manoratra plugins sy mampitombo ny safidinao dia dingana lehibe HANDEHANA.
Misy torolàlana amin'ny fampiasana ny rafitra plugin.
Ny tontonana dia ho hita amin'ny teny anglisy sy espaniola.
Ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny fametrahana sy ny fametrahana ny zava-drehetra mifandraika amin'ny tontonana dia ao amin'ny Wiki.
Ny interface interface (GUI) dia azo ovaina tanteraka, ny fomba CSS, ny loko. Ny logo, ny sary ary ny sary masina dia azo ovaina avy amin'ny sehatry ny fitantanana.
Hanana fanohanana amin'ny fandoavam-bola amin'ny fampiasana PayPal na Bitcoin amin'ny alàlan'ny Bitpay izy io.
Ny fampahalalana saro-pady (mpampiasa, domains, sns.) Dia handeha amin'ny Internet amin'ny fomba voafina.
Ny domain gnupanel.org dia hoavitrika ho fanampiana sy fanampiana, lisitry ny mailaka, forum, fanavaozana ny vaovao, izay ilaina rehetra hanampiana sy hanampiana ireo izay mampiasa GNUPanel.
Tsy afaka manome? Fomba hafa manampy
Fantatray fa tsy ny rehetra no afaka manampy amin'ny fanomezana, na noho ny toetra na fameperana ny firenena onenan'izy ireo, noho ny fahasahiranana ara-bola avy amin'ny tsirairay, sns., Tsy zava-baovao izany, lavitra azy io.
Ny vaovao tsara dia izany Na iza na iza afaka manampy ny fampielezan-kevitra, manome doka fotsiny ao amin'ny forum sy tambajotra sosialy, zarao ny URL an'ny pejin'ny fampielezan-kevitra (any Indiegogo) ary tsidiho matetika izy io ka anisan'ny malaza indrindra eto Indiegogo. Tsy ny vola rehetra, fa hanampy be koa izany.
Mitandrina ny vaovao?
Manoro hevitra aho raha te hampahafantatra anao momba an'io, dia araho @GNUTransfer ao amin'ny Twitter, azonao atao koa ny mandinika ny Pejy Indiegogo na zahao matetika ilay tranonkala GeekLab.com.ar.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny fampielezan-kevitra Crowdfunding dia manomboka manao ny GNUPanel v2.0 ho zava-misy
Andao hojerentsika raha amin'ny faharetana bebe kokoa (tsy dia be loatra) no handraisako ny cents Nuevo Sol hahafahako mandray anjara amin'ilay tetikasa.
Ary teny an-dalana, tsy irery ny GNUPanel. Is koa ZPanel, izay apetraka amin'ny fampiantranoana izay ananan'ny tranokalako. Na izany na tsy izany, hanao izay farany vitako aho hanohanana ny GNUPanel sy ny ZPanel.
Eny marina, azonao atao ve ny mametraka azy amin'ny aptitude install zpanel? Heveriko fa ny fametrahana dia toy ny script misy torolàlana, toy ny amin'ny iRedMail, izay tsy ao amin'ny repos ofisialy, sa tsy izany?
Eny ... tsy nanam-potoana nametrahana ny zpanel tao amin'ny Debian aho, fa mbola hanandrana ihany aho.
Ary raha izany, hiezaka ny hametraka ny zPanel miaraka amin'ny ity script mba hahitana ny vokany.
fandaharana amin'ny fahitalavitra dia hoy izy:
Ary maninona raha ampiasaina ny fotoana hanatsarana an'i Kloxo?
Mamaly ny fandaharana amin'ny fahitalavitra
Satria ity tetik'asa ity dia kendrena tsara amin'ny FSF, ho fanampin'izay, izy no safidy malalaka voalohany amin'ny cPanel nipoitra.
Mila ny fanampian'ny tsirairay ireo karazana tetikasa ireo!
Ary raha ny fanazavana, tsy misy na beta beta GNUPanel 2.0 aza alaina ao amin'io tranonkala io.
Ny tanjona dia ny hitadiavana vola hiasa amin'ilay kinova vaovao manontolo. Ahoana no hitrangan'ny zavatra mbola tsy natombokao? Ny tiako holazaina dia hoe mety manana porofo vitsivitsy izy ireo, saingy angamba tsia.
Enga anie izy ireo namoaka kinova alfa mba hahafahako mandray anjara amin'ny kaody. Vao tsy ela akory izay, nameno fotsiny ny karatra debit izay nifaneraserako tamin'ny PayPal.
Na izany na tsy izany, antenaiko fa hiroborobo ny fampielezan-kevitra, ary ny FSF dia hampiroborobo azy ho safidy iray amin'ny cPanel (raha ny tena izy, mora lavitra noho ny zPanel sy cPanel izany).
Miala tsiny amin'ilay fanontaniana i Elav.
Marina ve fa tsy hotohizana ny SoluOS? Io dia nambara tao amin'ny tranonkalany ofisialy. Ho ahy ny marina dia mahamenatra.
Eny eny, toa ... mahamenatra tokoa.
Toa vokatra mahaliana ho ahy izany, saingy tokony hatsaraina ny valisoa.
xenfan dia hoy izy:
Satria tsy tetik'asa famokarana vokatra io na hanokafana orinasa ity, ny valisoa dia tandindona ary mikendry ny hamorona fiarahamonina.
Ny kaody ary ny fampiasana tsy voafetra ampahibemaso ho an'ny daholobe no loka lehibe ho an'ny rehetra 🙂
Mamaly an'i xenfan
Ary tsy izany ihany, fa koa ny mety hahafahany mampifanaraka azy amin'ny sehatra maro (eo amin'izy ireo, Windows, OpenBSD, OSX sy maro hafa).
Ary teny an-dalana, ny serivisy ho an'ny mpanjifa GNUTransfer dia mahavariana.
Mieritreritra aho fa tokony hametraka t-shirt na hadalana toa izany izy ireo handrisihana ny fanomezana. Amin'izay dia tsy hahazo na inona na inona izy ireo.
Raha tsy ampy fampaherezana ilay programa sy ny mampiavaka azy ary ny fanomezana azy dia tsy hiova izany amin'ny "t-shirt na hadalana" araka ny voalazanao.
Mety hampiakatra ny tetibola ihany koa izany. Tsy aleo ve tery dia mahazo ilay programa?
Afaka mividy t-shirt ianao amin'ny fivarotana rehetra. Tsy misy ifandraisany amin'izany ny fandraisana anjara ambany!
Mifanohitra amin'izany fa naneho hevitra momba ny vaovao aho tamin'ny forum hafa mba hanampiana ahy ary misy ireo milaza fa fampandrosoana ihany koa izany…. ekonomika !!
Heveriko fa manampy ny valisoa ara-batana. Manaraka tetik'asa famoriam-bahoaka marobe aho ary miseho ireo andinindininy ireo.
Toa tsara amiko ity tetikasa ity, tokony efa elaela no nialany, na dia tsy tara loatra aza izany, tsy manam-bola aho fa efa nizara ny rohy tamin'ny tambajotran-tserasera rehetra ko, antenaiko fa tratra izany.
Heveriko fa ny safidy tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ny ispconfig 3, manana rindrambaiko ho an'ny android izy io izay ahafahanao manara-maso ny mpizara, na dia lafo be aza ny fametrahana azy ary tsy manana fampiasa firy.
Ity misy fomba fanaovana debian:
Fa momba izay ihany, manoratra "crowdfunding" ianao.
Manantena aho fa hanapa-kevitra ny hampiasa Cherokee ho mpizara amin'ny GNUPanel izy ireo fa tsy i Apache taloha sy tsy mahomby.
Araka ny fanazavan'i Geeklab, ny kinova 2.0 dia hampiasa Apache toy ny mahazatra fa ilay fonosana vaovao dia mety nanjary niaraka tamin'ny mpizara tranonkala hafa toa an'i Cherokee, Nginx, sns
Na iza na iza afaka manao ny fandraisany anjara mba hahafahanay mampiasa azy 🙂
Fa ilaina aloha raha misy manohana an'i Cherokee, saingy mazava ho azy fa hisafidy zavatra tohanana toa an'i Apache na nginx izy ireo. Ao amin'ny distro ho an'ny mpizara toa an'i Cherokee debian dia efa antitra izy io, ka an-taonany maro no tsy nisy nampakatra, na nampidirina anaty wheezy.
Tena tsara izany raha toa ka lasa zava-misy io tetikasa io.
Rahampitso, izay karama, dia hanome vola dolara vitsivitsy aho amin'ny antenaina, antenaina raha mivoaka izany ary rano.
Misaotra betsaka tamin'ny fanampianao ny tetikasa project
Maromaro amintsika no nanaparitaka izany, saingy tsy nisy na inona na inona nitranga.
Eto fotsiny dia misy mpanaraka 30000 40000 na 5, tsy mampino ve ny mieritreritra fa amin'ny 5 manome XNUMX dolara no hivoahany?
Eny, izany no lojikantsika izay mandray anjara, fa tsy an'ny an'ny maro hafa ... toa tena ilaina amiko io tetikasa io ... saingy hitanao fa tsy mitovy hevitra daholo izy rehetra ...
Mety hisy fomba handraisana anjara amin'ny fampandrosoana azy?
Manorata amin'i jorge [at] gnutransfer [dot] com hanazava izany.
Mandritra izany fotoana izany dia hampifanaraka ny GNUPanel hihazakazaka amin'ny Windows aho (fantatro fa sarotra izany, saingy ny marina dia hahasarika fahalianana bebe kokoa izany satria mampiasa io tontonana fanaraha-maso io ianao.
Azafady fa efa naveriko ny vaovao (toa copypasta no jerena voalohany, fa tsy) >> http://eliotime.com/2013/10/28/proximamente-gnupanel-2-0-la-primera-alternativa-al-cpanel/
Ny nandraran'izy ireo an'i Arzantina na zavatra XD tsy azoko idirana amin'ny milina hafa afa-tsy ny fampiasana proxy. Manana aho ...
Ary mbola tsy nampiasa PayPal hanome ianao?
[offtopic] Ahoana no nataonao tamin'ny fametrahana ny Unix voalohany? Te hanome azy tsiro ao anaty Virtualbox-ko izany. [/ Offtopic]
Toa somary tsy mandeha amin'ny laoniny ity tetik'asa ity!
Toa tsy hitako fa tsy nifanaraka tamin'ny toerany, satria ny tontonana fanaraha-maso resahina dia mifantoka amin'ny lozisialy LAMP, BSD ary / na ankizy hafa an'ny UNIX.
Ary koa, maro ny olona liana amin'ny fitantanana ny tranonkalany, noho izany cPanel mety ho ilaina fa rindrambaiko manana.
Heveriko fa tena zava-dehibe io fampielezan-kevitra io, ary na dia tsy misy fiatraikany amiko mivantana aza izany dia heveriko fa nampiasa ankolaka ireo pejin-tranonkala mampiasa ity haitao lasa ity aho, saingy ... ilaina foana ve ny fananana azy io aloha?
Nandritra ny fotoana kelikely dia nieritreritra aho fa tsy nohavaozina ny bilaogy. Raha ny fahitako azy dia toa tsy rariny amiko raha misy sombim-baovao manana ireo tombony ireo amin'ny hafa.
Mety misy fomba hafa hanasongadinana an'ity vaovao ity? (tsy manelingelina loatra).
Mazava ho azy fa tsy mandeha ity tetikasa ity fa misy fanazavana mazava marobe azo atao, tsy tsara ny manao tsinontsinona ny lojika amin'ny fitandremana toy izany!
Mazava ho azy fa tsy ilaina ny toerana voalohany. SAFIDY tsotra izao. Fampisehoana fanohanana ny tetikasa sy fomba iray hanampiana.
Sady TSY FAHAMARINANA izany satria ny filaminan'ny vaovao dia tsy apetraka arak'izay laharana na fifidianana. Ary noho io antony io indrindra dia tsy misy PRIVILEGES.
Ary farany ... INTRUSIF tokoa ve ny manohana fampielezan-kevitra mandritra ny 40 andro?
Izany dia tsy hahatratra ny tanjony noho ny antony hafa ary TSY ny fanalana ilay lahatsoratra eo amin'ny fonony, dia miharihary izany. Misy koa data angon-drakitra: tsy niova intsony ny isan'ny vakiteny.
Aza mihoa-pefy amin'ny toeran'ny purista tsy misy ifandraisany.
Maimaimpoana ny OS X Mavericks ary misy zavatra efa ananantsika